Samsung ၏ Galaxy Note7စီးရီးကိုသြဂုတ်လ ၇ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည် Androidsis
Samsung ၏ Galaxy Note7စီးရီးကိုသြဂုတ်လ ၇ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
လာမည့်စမတ်ဖုန်းလွှတ်တင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နေ့စဉ်ပေါ်ထွက်လာသည့်သတင်းနှင့်ပေါက်ကြားမှုများစွာထဲမှတစ်ခုသည် Galaxy Note 10 နှင့် 10 Pro သူတို့ဟာဒီနေ့လူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာအတွက်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများပေါ်ထွက်လာပြီး၎င်းစက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးသောအရာများအကြောင်းဖော်ပြသည်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများမှဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံး၏ပစ်လွှတ်သည့်ရက်စွဲအထိဖြစ်သည်။
ဒီအခွင့်အလမ်းအသစ်မှာ၊ ဒီအကြောင်း၊ ဒီကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောနှစ်လုံးကို၏တရားဝင်၏နေ့ယိုစိမ့်မှုအသစ်တစ်ခုအရယခုနှစ်သြဂုတ်လ ၇ ရက်လာမည့်နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံမည့်နေ့ရက်အတိအကျဖြစ်သည်။
ယခင်က Galaxy Note 10 စီးရီးကိုသြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ရောင်းချမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်အသစ်ကဒီသီအိုရီကိုငြင်းဆိုသည် ၎င်း၏တင်ဆက်မှု၏အချိန်သုံးရက်အစောပိုင်းကမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပါလိမ့်မယ်.
Samsung Galaxy Note 10 ၏အရောင်းများ
ခဲ့တာ CNeT ဒီသတင်းကိုစတင်ရေးသားတဲ့သူ။ အဆိုပါပေါ်တယ်ကြောင်းဖော်ပြသည် နယူးယောက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာနှစ်ခုစလုံးကိုစတိုင်ကျစွာကျင်းပမည်။ အထူးသဖြင့် Samsung ၏အစီအစဉ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သူများကိုကိုးကားပြီး ဖြည်ချပြီး ဘရွတ်ကလင်တွင်ရှိသောဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမဖြစ်သောဘာကလေစင်တာတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Samsung ကမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Galaxy Note ကို 9, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပြီးသားထိုအရပ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိရရှိထားသည့်အရာများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ Galaxy Note 10 ၏ standard မူကွဲတွင် ၆.၂၈ လက်မအရွယ် AMOLED QuadHD + မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး Pro version တွင် AMOLED QHD + panel ပါရှိသော်လည်း ၆.၇၅ လက်မထောင့်ဖြတ်ရှိလိမ့်မည်ကိုတွေ့ရှိရသည် ။ ဖန်သားပြင်နှစ်ခုလုံးကိုသူတို့အနားမှာကွေးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှစ်ခုလုံးက \_ t ၃.၅ မီလီမီတာအသံအပေါက်ကိုဖယ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်.
Samsung Galaxy Note 10 ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုခြင်းကိုစစ်ထုတ်သည်
နှစ် ဦး စလုံးသည် In-display ultrasonic fingerprint scanner ကိုတပ်ဆင်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။, 5G ကွန်ယက်များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူလာ။ နှင့်တပ်ဆင်ထားကြသည် Snapdragon 855 o Exynos 9825။ စျေးကွက်ပေါ် မူတည်၍ chipset အသုံးပြုမှုကွဲပြားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ၏ Galaxy Note7စီးရီးကိုသြဂုတ်လ ၇ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Huawei သည်ယခုအပတ် MediaPad M6 ကိုတင်ပြမည်